လွမ်းမောစရာ . စည်းရိုးနဲ့
မျက်နှာစာ ခြံဝန်းနဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ
( ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်မှတော့ )
စွမ်းသမျှ လင်းရတော့မှာပဲ .
အလဲ့... ရောင်စုံဖဲကြိုး ထုပ်ပိုးရောက်လာ
လောကဓံမှာ ပါးချိုင့်လေးနဲ့ လှအားရဲ့ .
( လက်ခံယူမယ့် ) သံယောဇဉ် နဖူးမှာလည်း
............................................................ . -
( ၁၇ / အောက်တိုဘာ/ ၂၀၁၆)﻿
Posted by JACBA at 8:32 AM